MACRON NA-AGA NA FELA AFRIKA SHRINE NA TUSDEE
Previous NDI UWEOJII NA-AGBA AKAEBE MAKA UGWO ORU NA MAIDUGURI
Next ỤLO ORU NA-EBUTE OGWU NJE HIV COMMUNITY NA KANO, KATSINA STATES
AKUKO UWA, Hot News, Ihe, IHE N'EME N'OBODO, Local News, OGE ANULI
Onye ndu French bụ Emmanuel Macron ga-aga na AfriKa Shrine, bụ ụlọ oriri na nkwari abalị na Lagos nke akụkọ akụkọ bụ Fela Anikulapo Kuti guzobere.
Macron ga – abụ “ezigbo onye isi” nke mbụ ịbanye na klọb ahụ na – ese anwụrụ wii wii, ndị na – agba egwú na ndị na – eme mkpesa. Ọ bụghị onye ọbịa na Nigeria. Ọ zụrụ azụ dịka onye isi obodo na French Embassy na Lagos na 2004, afọ asaa mgbe Fela nwụsịrị.
Late Fela Anikulapo Kuti, eze afrobeat
NDI UWEOJII NA-AGBA AKAEBE MAKA UGWO ORU NA MAIDUGURI
Afrika Shrine nke di n’ugwu Lagos nke Ikeja wepuru okpukpu mbu nke Fela Kuti nke gbara oku na 1977, mana maka otutu nde ndi ozo ka o nochite anya ulo mbu nke Shrine nke ulo oru egwu.
President Emmanuel Macron: Onye mbido mbụ na-aga na Shrine
“Ụlọ nsọ ahụ bụ ebe a na-ahụ anya,” ka Olivier Laouchez, bụ onyeisi nke mgbasa ozi TRACE na ndị na-eme ntụrụndụ na onye nhazi nke ihe omume Macron ga-aga, na-agbakwụnye na Lagos bụ “isi obodo Africa”.
EGWUREGWU N’ETITI NIGERIA NA ARGENTINA JIKOTARA NJO
N’uhuruchi a ga-eme egwuregwu, ihe ngosi ejiji site n’edu ndị na-emepụta Africa na nzukọ na kpakpando site na ụlọ ọrụ nkiri ihe nkiri Nollywood na-akpali akpali.
Ndị na-agba egwú dị iche iche na Fela’s Shrine nke ga-amasị President Macron na Tuesday. Foto AFP
Lagos na – enyekwa Johannesburg – nke ọzọ na – eto eto African culture – a na – agba ọsọ maka ego ya na nkà ihe omume ya na mmemme Art X ọ bụla.
“E nwere ihe doro anya na ihe na Lagos, na nchịkọta ndị na-ere ahịa, nke a ga-agbawa,” ka ọkachamara n’ihe banyere nkà ọgbara ọhụrụ bụ Marie-Cecile Zinsou, bụ onye dabeere na Benin dị nso.
“Echiche bụ igosi ọgaranya na ọdịbendị nke ọdịbendị Africa,” ka Laouchez kwuru.
“Europe amaghị Africa ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ omenala ya.”
ÒTÙ NWERE OBI UTO KARIA AFO IRI NA ITOOLU NA-ACHIKWAGHI ACHIKWA
Macron, onye na-eleta isi obodo Mauritania nouakchott iji gaa ogbako Afrika Afrika na Sunday, ga aga n’ihu Naijiria isi obodo Abuja maka mkparita uka ya na Muhammadu Buhari onye agha ya na nchedo na iyi egwu, tupu ya abia Lagos, otu megapolis nke di nde mmadu iri.
Fela Anikulapo Kuti sitere na otu onye Naijiria bụ onye patrician nke egwú egwú ọhụụ na ọchịchọ maka ikpe ziri ezi mere ya kpakpando zuru ụwa ọnụ na ndị na-achịbu ndị isi nke Nigeria. Fela nwụrụ na 2 August 1997. Ọ dị afọ 59.
A na-akpọ ya “onyeisi oche ojii” site na ndị na-efe ofufe, Fọg Kuti, ụdị e ji mara ahia, Afrobeat e mere baptizim, na-abụ abụ na nwa ya nwoke na Yoruba na ndị na-ezighị ezi banyere nrụrụ aka na enweghị ike.
ỤLO ORU NA-EBUTE OGWU NJE HIV COMMUNITY NA KANO, KATSINA STATES
Abraham Tcha-Tchere, onye na-arụ ọrụ na-ahụ maka nkwenkwe omenala Francaise nke dị na Lagos, kwuru na nleta nke Macron kwesịrị ekwesị na “France na-enwe mmekọrịta dị ukwuu na omenala Nigeria.
“Ọ bụ French nke haziri njem nleta mbụ Fela na 1981,” ka o kwuru.
“Mgbe ahụ ụmụ ya bụ Femi na Seun kwadoro ọrụ nlekọta ụwa ha na France.”
UGBOALA 54 GBARA OKU NA TANKER LAGOS, MMADU ITOOLU NWURU NA
Ụlọ nsọ bụ nnukwu ọnụ ụlọ, na-acha aja aja na odo, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha uhie uhie ma na-acha oji, na-atụ aro ọdịdị Afrika.
Laouchez kwadoro na ịhazi ihe omume ahụ abụghị ihe nkiri, na-ekwu, sị: “Ọ chọrọ nhazi dị ukwuu n’ihi na enwere ike ike mgbe niile ma ị ghaghị ịhụ na ndị nchekwa ụlọ anaghị adaba n’isi ndị ọbịa … ma ọ bụ ihe na-akpali akpali.”
“N’ikwu okwu n’egwuregwu, ọhụụ Afrobeat ọhụrụ nke Nigeria bụ zuru ụwa ọnụ,” ka ọ gbakwụnyere, na-atụ aka na kpakpando dị ka Davido, Wizkid na Mr Eazi.
africa AFRIKA AFRIKA SHRINE AFRIKASHRINE FELA FELABRATION france hot hot news HOTNEWS Isimbido isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV LATEST MACRON news NIGERIA post SHRINE